New Clinical Muedzo muVarwere vane Yakanyanya COVID-19 Pneumonia | Nhau dzeWaya
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » New Clinical Muedzo muVarwere vane Critical COVID-19 Pneumonia
CalciMedica Inc., iyo CRAC (calcium release-activated calcium) chiteshi kambani, nhasi yakazivisa kutangwa kweCARDEA-Plus, Phase 2b kiriniki yekuedza iri kuitwa muUnited States neCanada, inogona kushanda semutungamiri muchikamu chayo. 3 chirongwa chekuvandudza cheAuxora™ mune varwere vane yakakosha COVID-19 pneumonia.
Muedzo wakagadzirirwa kuunganidza yakawedzera kuchengetedzwa kwevarwere data neAuxora, kuongorora kuchengetedzwa uye kushanda kweAuxora pamwe chete nezvose tocilizumab uye corticosteroids, uye kuongorora kuchengetedzwa uye kushanda kweatatu kupesana nemazuva matanhatu edosing. Iyo Kambani nguva pfupi yadarika yakashuma data repamusoro kubva muyedzo yeCARDEA Phase 2 inotsigira zvimwe zvidzidzo muhuwandu hwevarwere.
CARDEA-Plus ichanyoresa varwere veCOVID-19 pneumonia vane PaO2/FiO2 (P/F) chiyero che ≤200 vanoda high-flow nasal cannula (HFNC) kana noninvasive ventilation (NIV). Varwere vachagamuchira 2.0 mg / kg yekutanga yeAuxora inoteverwa ne 1.6 mg / kg pamaawa makumi maviri nemana, uye 24 mg / kg pamaawa makumi mana nemasere. Vaya varwere vane chiyero cheP/F che ≤1.6 kana pa mechanical ventilation pamaawa makumi mana nemasere vanozokodzera kurongeka kuti vagamuchire madosi matatu eAuxora kana matatu e placebo. Vese varwere vanogashira mwero wekutarisirwa izvo zvinogona kusanganisira kushandiswa kwecorticosteroids uye/kana tocilizumab.
"Zvisinei nekuwedzera kwehuwandu hwekudzivirira kweCCIDID-19, huwandu hwepamusoro hwekurapwa uye kufa kuchiri kuunza dambudziko rakakura," akadaro Sudarshan Hebbar, MD, Chief Medical Officer weCalciMedica. “Kunyangwe tocilizumab yave kushandiswa zvakanyanya muvarwere vari muchipatara neCCIDID-19, panoramba paine kudiwa kwekuvandudza mhedzisiro yevarwere. Isu tinotenda kuti Auxora ine yakasarudzika nzira yekuita uye pharmacokinetic zvivakwa izvo zvinogona kupa rubatsiro rwekiriniki kune varwere vane yakakosha COVID-19 pneumonia. "
"Kutangwa kwechidzidzo ichi, icho chinobvumirawo kutonga kweAuxora ine tocilizumab uye corticosteroids muvarwere vane pneumonia yakaoma yeCCIDID-19, chiitiko chakakosha kuKambani yedu," akadaro Rachel Leheny, Ph.D., Chief Executive Officer weCalciMedica. . “Zvakakosha, mhedzisiro yeongororo iyi, ichateverwa nenhaurirano neFDA, ichazivisa dhizaini yedanho rechitatu rekuyedza kiriniki gare gare gore rino. Takagamuchira manyawi nerutsigiro kubva kunzvimbo dzevaongorori pachidzidzo ichi uye tinotarisira kunyoresa nekukurumidza. "